कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह सभापति देउवासँग किन भड्किए ? - Vishwanews.com
कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह सभापति देउवासँग किन भड्किए ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सांसद पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पत्र थमाएका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएको छ । यो असन्तुष्टी महाधिवेशनका सन्दर्भमा उठेको असन्तुष्टीको एक झिल्को मात्र हो ।
क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर नेता सिंहले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ता धर्ना बसिरहेका छन् । उनीहरुले पार्टी विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यता दिएको आरोप लगाएको छन । यो काम रोक्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । धर्नामा बसेका नेता तथा कार्यकताको मागमा सहमति जनाउँदै आफुले सांसद पदबाट राजिनामा गरेको उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा पत्र थमाउनु अगाडी उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटेका थिए । उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनको गुनासो कांग्रेसले ठेकेदार र व्यापारीलाई क्रियासिल सदस्यता दिएर कार्यक्रतामाथि अन्याय गरेको प्रति छ ।